Ubongo vana, katuni yeTanzania mukutsvaga Africa - AFRIKHEPRI
Ubongo vana, chivara cheTanzania mukutsvaga Africa
Inzwi rinonyangadza rinzwi rinopindira mumahofisi eBubungo Media. Muchidiki, asingatomboregi akarekodha studio yakagadzirirwa pazasi kwenzvimbo yakazaruka, Cleng'a Ng'atigwa, mumwe shanu co-havaoni zviri Tanzania atange-up kushandisa pagadzirwe cartoons, anonyora okupedzisira mitsetse Mama your, shiri ine manyoro plumage uye mhepo kuseka apo nevadzidzisi vatatu 3D yakabatikana seri kwemakombiyuta avo. Mumazuva maviri, chiitiko chitsva cheUbongo Kids ichaparadzirwa paTBC1, mutanhi weTanzania yepaTV.
Yakasunungurwa kwekutanga kuJanuary 2014, Ubongo Kids ndiyo yekutanga yehupenyu "Yakasikwa kubva pakutanga kuTanzania nevanyori veTanzania". Zvidzidzo zvaro zvekudzidzisa, zvakanyanya ku masvomhu nesayenzi, zvinoratidza zviratidzo zvevana vatatu munyika inofungidzira apo mhuka dzinotaura.
Kutenda kune rimwe sangano reSMS rinopindirana rinowanika pamutengo we2 masentimita ema Euro maawa 24, vana vanogona kutora mhinduro mumibvunzo iyo hurukuro dzavo dzakakurukurwa panguva yekuratidzwa.
"Vanhu vane mamiriyoni e9 vane terevhizheni uye kupindira kwemashure kunofungidzirwa pane zvinopfuura 65%. Takagadzira kuratidzwa kunofanirana nehutano huripo muTanzania kusvika kune vazhinji vana sezvinobvira, anotsanangura Cleng'a Ng'atigwa.
Mumwedzi mishomanana chete, yakatova purogiramu yakatariswa zvikuru munyika uye vanopfuura mamiriyoni vanoona vhiki imwe neimwe. Ubongo Kids inoparidzirwawo muChirungu muEast Africa kuburikidza neChinese satellite channel Star Swahili, inoti Nisha Ligon, mutevedzeri uye mukuru mukuru weBongo Media.
Ndapedza gore muna Dar es Salaam sezvo chikamu yunivhesiti Exchange uye yakasimbiswa tenzi muLondon kushandisa dzidzo sainzi Via michina mitsva, American ichi makumi matatu, vane rakamonana bvudzi uye boyish chiso, 2013 anosarudza kugadzirisa zvachose muTanzania.
"Ndaida kushandisa ruzivo rwangu uye kupa zvikoro zvekudzidzisa munyika umo pakanga pasina chinhu chakadai. Panguva yemudzidzi wangu mugore reDar-es-Salaam, ndakarohwa nekushaiwa kwekuvaraidza kwevana uye kukundikana kwedzidziso yeTanzania. ", anodaro.
Kana boka anoshandisa vanhu vashanu nguva yakazara uye akagadzirira kutamira muzvivako zvitsva uye hombe vakagadzirira ane kuchangamuka Studio, Nisha Ligon anoyeuka nguva havaoni shanu vakaungana iye kushanda. "Isu tose taive nebasa rinotevera. Isu takasika zvikamu zvitanhatu zvitanhatu pasina sarudzo uye nezvatinozviita ", anoyeuka mugadziri.
Mari kazhinji voga vanoita uye rutsigiro crowdfounding (fashoni crowdfunding Via padandemutande), Ubongo Media akakwanisa kukura zvakanaka chikamu anoonga vatsigire Tanzania Bank CRDB uye zveminda kunotangira Mukutepfenyura purogiramu musi Nyeredzi yeSwahili satellite satellite.
"Takasimudza 50 000 euros nekuda kwechikwata chevanhu vakawanda uye CRDB yakatipa envelopu ye makumi ezviuru ema euro. Asi zvizhinji zvemari yedu inoshandiswa kubhadhara muparidzi wedu mukuru. Zviketani zveTanzania hazvina mari. Mutemo ndewokubhadhara kuve kuparadzirwa, anotsanangura musikana muduku.
Kutanga-kutarisa kuri kutsvaga mari yekuwana nguva yechipiri yeUbongo Kids. Kuti uwedzere kusvika kumaWest Africa anotaura chiFrench, Ubongo Media ikozvino inoshandura zvikamu zveFrench. Iyo sangano iri pamusoro pekutanga chikafu chitsva chekudzidzisa kudzidzisa Chirungu kuvana kubva ku3 kusvika ku7 yemakore.
Dzidza zvakawanda pamusoro http://www.lemonde.fr/afrique/article/2015/05/02/ubongo-kids-un-dessin-anime-tanzanien-a-la-conquete-de-l-afrique_4626343_3212.html#GELvGfp27dHQzt7w.99